Fijaliana ny an’ireo mpianatry ny oniversiten’Antananarivo izay monina eny amin’ireo trano natao ho an’ny mpianatra eny Ambatomaro. Mangiran-dratsy, hoy izy ireo, no efa milahatra rano amin’ny Bidon izahay saingy hariva vao mahazo.
Nanao fihetsiketsehana ireo mpianatra sy mponina eny Ambatomaro ny Zoma teo noho ny olana amin’ny famatsian-drano. Nisy ny fampiasan-kery avy amin’ny mpitandro ny filaminana, raha ny voalaza, ary ankoatra ny fanipazana etona mandatsa-dranomaso dia nisy koa ny fisamborana sy fikasihan-tanana.
TSY EKENA NY FIKASIHAN-TANANA
Ny marainan’ny sabotsy teo dia nanao fanambarana ny solontenan’ireo mpianatry ny oniversite monina eny Ambatomaro fa tsy manaiky ny fikasihan-tanana azy ireo ary mitaky ny famoahana ireo namany tsy hita popoka. Miisa roalahy moa ireo mpianatra voalaza ho tsy hita izay nalehany ireo.